Git Sangit News » यस्तो सर्तसहित निषेधाज्ञा हटाउँदै प्रशासन, भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना !
यस्तो सर्तसहित निषेधाज्ञा हटाउँदै प्रशासन, भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना !
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा १२ दिनदेखि जारी निषेधाज्ञा सर्तसहित हटाइएको छ । भदौ १ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि हटाउने निर्णय भएको हो ।
प्रकाशित मिति १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:२२